Mijere hatrany amin'ny fifaninanana an-tserasera miaraka amin'i Rivalorta | Martech Zone
Mijere hatrany amin'ny fifaninanana an-tserasera miaraka amin'i Rivalhio
Sabotsy, Martsa 14, 2015 Zoma, Martsa 13, 2015 Douglas Karr
Manangona angona avy amin'ny loharanom-pahalalana isan-karazany amin'ny mpifaninana aminao i Rivaloks ary manao izay hahitan'ny data mora azo avy amin'ny foibe data mpifaninana tokana. Ny loharanom-pahalalana dia misy ny fifamoivoizana, ny fikarohana, ny tranokala, ny gazety, ny gazety, ny sosialy ary hatramin'ny olona ary ny fanovana asa.
Rivalhio dia vahaolana SaaS izay mametraka ny faharanitan-tsaina amin'ny fifaninanana eo an-tananao. Mino izahay fa amin'ny fianarana avy amin'ireo mpifaninana aminao dia afaka mihombo haingana ianao, manalavitra ireo lesoka ary mahazo tombony. Miaraka amin'i Rivalelp, ireo orinasa amin'ny habe rehetra dia afaka mampiasa ny herin'ny faharanitan-tsaina amin'ny fifaninanana ary mamorona paikady tarihin'ny data.
Tafiditra ao anatin'izany ny sehatra fifandanjana mifampitady Rivalelp
Fanaraha-maso ny fanovana tranonkala - Araho maso ny tranonkalan'ny mpifaninana ary mahazoa fanairana raha vantany vao misy fiovana. Manasongadina fanavaozana ny Rivalelp, hatramin'ny antsipiriany madinidinika, hampahafantatra anao na dia ny fiovan'ny paikady kely indrindra aza. Miaraka amin'ny tranokalan'izy ireo Cropper, azonao atao koa ny manivana ny tabataba ary mifantoka amin'ny faritra pejy izay manan-danja aminao fotsiny.
Fanaraha-maso an-gazety an-tserasera - Angony ny vaovao, ny lahatsoratra ary ny fanamarihana avy amin'ny loharanom-baovao lehibe rehetra ary aseho azy ho azy eo amin'ny tabilao sy ny tatitra isan'andro. Araho ireo voalaza voarain'ny mpifaninana aminao, amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sy ny haino aman-jery, ary zarao raha hanohitra anao izy ireo. Azonao atao ny manamboatra teny fanalahidy dimy hatramin'ny dimy
isaky ny mpifaninana amin'ny fandrakofana sy ny fametrahana mazava tsara kokoa.
Fanaraha-maso ny fifamoivoizana sy ny fikarohana - Araho maso ny fifamoivoizanao ary ampitahao amin'ny an'ny mpifaninana aminao, manasongadina ireo KPI manan-danja indrindra: fitsidihana tsy manam-paharoa, fijerena pejy isaky ny mpampiasa, laharan'ny fifamoivoizana manerantany ary maro hafa. Mahazoa fahalalana feno momba ny fifamoivoizany hanombanana ny isan'ny varotra sy handrefesana ny fiantraikan'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing. Ampitahao amin'ny isan'izy ireo ny isa azon'izy ireo mba handaminana tsara ny paikadin'ny fifamoivoizana. Ao anatin'izany ny laharana manerantany, isa ny fironana fifamoivoizana, fijery pejy isaky ny mpampiasa, rohy miditra, naoty Google fampisehoana, naoty manan-danja amin'ny tranokala, mpitsidika tombanana, fotoana eo amin'ny toerana, tahan'ny fifamoivoizana, fivezivezena fikarohana, teny lakile voajanahary sy karama.
Fanaraha-maso ny media sosialy - Araho maso ireo tambajotra sosialy dimy voalohany izay mandefa mpitsidika ny tranonkalan'ity mpifaninana ity. Jereo ny firotsahana sy ny fanarahana ny atiny nizara rehetra.
Fanaraha-maso ny blaogy sy ny marketing amin'ny atiny - Fantaro ny atiny fahombiazan'ny mpifaninana aminao ary tadiavo hoe aiza no ahazoany ny fizarana sosialy betsaka indrindra. Ampiasao ny angon-drakitra arak'izy ireo hanadio ny paikadin'ny votoatinao manokana sy handresenao mpihaino tsy mivadika.
Email sy Marketing amin'ny Newsletter - Fahafahana manara-maso ny takelaka ahitanao ny zavatra ezahan'ny mpifaninana aminao zaraina amin'ny vahoaka kendreny, ary isaky ny ahoana no mizara izany.
Tags: mpifaninana manaitraFanaraha-maso ny bilaogyfanairana mifaninanafanaraha-maso mailaka mifaninanafikarohana ifaninananaBenchmarking mpifaninanafanaraha-maso ny mailakatatitra momba ny mailakamanara-maso mpifaninanaFanaraha-maso ny vaovao sy ny teny lakilerivalyRivaliqsaasFanaraha-maso ny fampahalalana SEOfanaraha-maso ny media sosialyrindrambaiko ho serivisytrackmavenFanaraha-maso ny fampahalalana momba ny fifamoivoizanaFanaraha-maso ny fanovana ny pejy web
Ahoana no mihazakazaka fitsapana A / B miaraka amin'ny ChangeAgain
Ny media sosialy dia tokony hatao ary tsy tokony hatao